Jose Mourinho oo ka baryaya Giggs in uu joogo halka halyeyga Manchester United oo qorsheenayo in uu iska tago - Gool FM	twitter
Jose Mourinho oo ka baryaya Giggs in uu joogo halka halyeyga Manchester United oo qorsheenayo in uu iska tago
(London) 25 Maajo 2016. JOSE MOURINHO waxa uu doonayaa in Ryan Giggs uu baaqi ku ahaado Old Trafford si uu uga mid noqdo kooxdiisa tababarayaasha.
Magacaabida Mourinho waxaa la filayaa in la xaqiijiyo 48-da saacadood ee soo socota – waxa uu shaqadiisa ugu horeysa ka dhigi doonaa in uu Giggs ku qanciyo baaqi ku ahaanshaha Old Trafford.
Waxa uu la imaan doonaa shaqsiga lagu tilaamo gacantiisa middig ee uu ku kalsoon yahay Rui Faria, kaas oo la soo shaqeeyey tan iyo shaqadiisii ugu horeeysay ee tababare 2001 – waxa uu ka dhigi doonaa caawihiisa kowaad halka uu tababaraha goolhayaha u magacaabi doono Silvinho Louro.
Laakiin waxaa la fahansan yahay in uu doonayo Giggs in uu siiyo kaalin saameyn leh.
Mourinho wuu ogyahay in celinta dadkii hore ee United ay muhiim tahay laakiin Giggs oo caawiye u ahaa Van Gaal ma cada in uu aqbalidoono iyo in kale, wali shaqo hoose.
Wey ku adkaan doontaa in uu ka tago koox uu 29 sano xiriir la lahaa laakiin waxa uu isha ku hayaa in uu baadi goobo waayihiisa maamuul wuuna la socdaa in ay hada tahay waqtigii saxdaa ahaa ee uu hore u socon lahaa.
Giggs waxa uu u duulay Dubai si uu fasaxiisa ugu soo qaado waxaana la sheegay in uu ka careysan yahay in aan isaga shaqada loo dhiibin markii la eryey Van Gaal madaama loo arkayey in qorshuhu ahaa in uu badalo ninka reer Holland.
Laakiin United ma aysan khamaari karin kaddib saddex sano oo aysan ku guuleysan Premier League halka xifaaliyeyaashooda Manchester City ay magacabeen Pep Guardiola.
Mustaqbalka Giggs waxa uu ahaa qodob uu ku xigeenka madaxa fulinta United Ed Woodward uu kala hadlay wakiilka Mourinho , Jorge Mendes markii ay London ku kulmeen shalay.
Waxaa la fahansan yahay in caqabad badan oo qandaraaska ah aan la fileyn United-na ay rajeyneyso in ay ku dhawaaqyo saxiixa Mourinho khamiista.
United waxa ay beenisay in ay lacag siisay Mourinho si uusan dalabyo kale u aqbalin diyaarna u ahaado marka cayrinta Van Gaal la xaqiijiyo.
Woodward waxa uu aad u doonayaa dhameynta heshiiska halka bartilmaameedyada suuqa ay u fududaan doonto hadii Jose uu helo.
Rug cadaaga Sweden Zlatan Ibrahimovic ayaa noqon kara kii ugu horeeyey – waxaa lagu heli karaa bilaash isaga oo diyaar u ah la shaqeynta Mourinho.
Waxaa xalay dalka France la isla dhex marayey in Ibrahimovic loo diyaariyey mushaar dhan £400,000 si uu Old Trafford u soo caga dhigto.
34 jirka waxaa xaqiiq in waayihiisii wacnaa ee dheesha soo gaba gabooday balse waxaa mushaarka intaas le’eg ee uu qaadanayo laga dhalin doonaa iibinta maaliyadiisa.